Filtrer les éléments par date : mardi, 09 juin 2020
mardi, 09 juin 2020 14:38
Berano-Antsalova: Roa lahy mpamaky fasana maty voatifitry ny miaramila ZDRPS
Nitrangana vaky fasana tao Berano, Antsalova ny alin’ny sabotsy hifoha ny alahady 7 jona 2020. Mponina miambina vary eny an-tsaha amin’ny alina no naheno feon-javatra nidobodoboka sy nahatsikaritra dimy lahy mitam-piadiana teo ampanilihana vato amin’ny fasana, ka ireo no nampandre ny miaramila.
Niditra an-tsehatra ny miaramila sy ny Fokonolona vao nahazo fampandrenesana. Tra-tehaka teo ampanokafana razana ireo olon-dratsy, ny alahady tokony ho tamin’ny 2 ora maraina.
Nisy ny fifampitifirana ka maty tamin’izany ny 2 tamin’ireo dahalo, raha toa ka vaky nandositra ny 3.
Tsy nisy taolambalo very rehefa natao ny fanamarinana.
Nanomboka ny taona 2019 no nampirongatra indray ny vaky fasana tamin’iny Distrika Antsalova iny, ary fasana aman-jatony no efa lasibatra tamin’izany. Ireo fitaovana sarobidy ampanarahana ny maty toy ny volamena, volafotsy, … no tena robain’ireo mpamaky fasana.
mardi, 09 juin 2020 14:34
Centre d'Immatriculation Ambohidahy: Hiverina hisokatra manomboka ny Alarobia 10 Jona izao
Nanao fampahafantarina ny Governora Faritra Analamanga fa hiverina hisokatra manomboka ny Alarobia 10 Jona izao ny Centre d'Immatriculation (CIM) Ambohidahy-Antananarivo ho an’izay manandraharaha ao.
Hisy ny fepetra ara-pahasalamana ho arahina amin'izany.
mardi, 09 juin 2020 14:03
Soarano sy Analakely: Toeram-pivarotana maromaro no noravan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra
Box na toeram-pivarotana maromaro no noravan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra teo Soarano sy Analakely. « Miorina eo amin’ny toerana tsy azo anorenana, izay natao ho an’ny mpandeha an-tongotra sy ny fiara » ireo hoy ny Ben’ny tanàna.
Ity farany izay nanamafy fa « ara-dalàna ny fanatanterahana izany satria efa nampandrenesina mialoha ireo mpivarotra araky ny fe-potoana voalazan’ny lalàna. Tonga nanatrika teny an-toerana ihany koa ny Vadintany ».
Fanodinkodinana « Vary mora »: Olona miisa fito, misy « Assistant Parlementaire » sy Tale iraisam-paritra nidoboka am-ponja
Taty Farafangana, renivohitry ny Faritra Atsimo Atsinanana no niseho ity fanodinkodinana « Vary mora » ity. Nitaky ny hanokafana fanadihadiana mahakasika izany ny RNDC (Réseau National de Défense des Consommateurs), fikambanana mpiaro ny zon’ny mpanjifa tarihin’i Rabentsara Lita, amin’ny alalan’ny solontenany aty Farafangana ny 22 may 2020.
Olona miisa fito no voarohirohy amin’ity raharaha ity, ka lehilahy ny efatra ary vehivavy ny telo. Tale iraisam-paritra ny iray miaraka amin’ny vadiny sy ny anabaviny, « Assistant Parlementaire » ny telo ary mpivarotra mpamongady.
Nisy ny tsindry samihafa, tao ny nanao izay hampandamoka ny raharahara, ny hafa nitaky ny hivoahan’ny marina. Niakatra Fampanoavana omaly alatsinainy 8 jona ny raharaha, ka tazomina amponja vonjimaika avokoa ireo olona miisa fito voarohirohy tamin’ity fanodinkodinana « Vary mora » taty Farafangana ity.
mardi, 09 juin 2020 13:53
CISCO Antanifotsy: Nanomboka omaly ny adina ara-panatajahantena BEPC
Tanterahina ny 08 ka hatramin’ny 16 Jona, haharitra fito andro, ny fanadinana ara-panantanjaha-tena BEPC eto amin'ny CISCO Antanifotsy DRENETP Vakinankaratra.
Miara-mientana amin’ny fanatanterahana izany ireo mpitondra isan'ambaratongany eo amin'ny Fanabeazana sy ny mpitandro filaminana.
mardi, 09 juin 2020 13:41
9 juin: Journée Internationale des Archives
mardi, 09 juin 2020 13:40
Tsy ara-drariny ara-tsosialy: Hitombo ny hantsana mampiteraka lonilony
Eken'ny rehetra fa ny fiaraha-monina dia misy sokajiny avy, ao ny manana, ao ny antoniny, izay efa mihavitsy, ary ao ny mahantra.
Ny politikam-panjakana hatramin'izay taona maro nifandimby izay anefa, dia ny mampitatao hetra ho an'ireo manana sy antoniny hatrany, ampandehanana ny asam-panjakana sy anampiana ireto mahantra.
Hita ohatra izany amin'ny faktiora Jirama, ambany vidy ny 1ère tranche hitsinjovana ireo mahantra sy kely fidiram-bola, izay mazava ho azy fa kely fandaniana jiro sy rano.
Ireo manam-bola kosa izay betsaka fandaniana dia tafiditra any amin'ny 2ème tranche sy Tarif 16 mihitsy ka dia mandoa lafo.